Miyaad udiyaarineysaa steroid xooggan oo ku guuleystay kalsoonida rugaha caafimaadka? Hagaag, methyltestosterone waa inay noqotaa doorasho xiga. Soo ogow faa'iidooyinka isticmaalka daroogada, taariikhdeeda ku jirta habdhismeedka jirka jirka iyo caafimaadka, saameynta daawada, iyo sida loo iibsado qiyaasta.
Dhismaha jidhka maahan mid ku saabsan isticmaalka jimicsiga maxaliga ah iyo samaynta jimicsiga jirka ee adag. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso wax ka badan inta aad shaqeyneyso. Dhamaantiin, waxaa laga yaabaa inaad lumiso maskaxda iyo dhiirigelinta wadada, gaar ahaan marka natiijooyinka aan macquul ahayn.
Dhaqdhaqaaqa jirka oo dhan wuxuu u jeedaa naqshad jilicsan oo leh murqo caan ah oo si fiican loo qeexay. Haddii aad u socoto tartan, dagaalkaaga, xooggaaga, iyo tamarta ayaa tirin doona. Dareenka dhabta ah, dawladahani waa aasaaska guushaada. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Midkee Wins?)
Miyaad ku jirtaa xaqiiqadan? Hayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku kaydsan tahay. Inkastoo aan heysano hadafyo kala duwan, dhammaanteen waxaan dooneynaa in aan si sax ah u eegno si aan wax uga qabano kooxdayada. Xaaladdan, marnaba ma dhicin in la isku daydo steroids sida methyltestosterone. Wixii faa'idada ah ee kor u qaadista gardarrada isticmaalaha, daroogada ayaa dhaaftay dhammaan tartamayaasheeda.
Ka hor inta aanad qaadan methyltestosterone, hubso inaad fahanto maqaalkan.
1.Waa maxay Methyltestosterone? Sidee Ayuu U Shaqeeyaa?
Methyltestosterone wuxuu ka mid yahay dhowr ka mid ah iskuulada da 'yarta ah ee loo yaqaan' anabolic steroids 'ee jirka lagu dhejiyo. Waa unug kiimiko ah oo ay CAS tahay 58-18-4. Badeecadu waa daroogo caadi ah oo loogu talagalay jir-dhisayaasha maaddaama ay soo bandhigto sifooyinka asaasiga ah iyo walxaha anabolic.
Methyltestosterone waa habka baaritaanka afka ee hore, oo ka soo baxa testosterone. Maxaa ka dhigaya dhismaha gaarka ah ee lagu daro alxamida C17-alpha molecule. Cilmi-baaristu, ku-darsiga kooxda methyl wuxuu xaqiijiyaa in daroogadu ay ku noolaan karto mashiinka farsamada iyo geedi socodka dheef-shiidka.
Methyltestosterone methyl group wuxuu ku darayaa 17th jagada atom atom ah. Muuqaalkan wuxuu ka dhigayaa dhismaha inuu ku dhaco fasalka C-17 alfa-alkylated steroids. Si kastaba ha noqotee, Dhismaha jirka ee methyltestosterone, sifooyinka anabolic ma aha mid la ogaan karo maadaama ay la jirto xeryaha kale ee C-17-aa.
Qiimaynta iyo natiijooyinka anabolikada waxsoosaarku waa qiyaasta 100 ee qayb kasta. 1: Saamaynta 1 waxay u dhigantaa in imtixaanka tijaabada.
Inkastoo testosterone asalka ah uu ka tago wax kasta oo jirka ah oo leh murqo caan ah iyo waxqabad aad u fiican, isticmaalkiisu waa mid guud. Tusaale ahaan, darajada pharma Methyltestosterone waxay leedahay dawooyinka caafimaadka ee ku saabsan daaweynta kansarka naaska, daaweynta menopausal, iyo maareynta osteoporosis.
Barashada Methyltestosterone waxay dib ugu noqotaa 1935. Isticmaalidda steroid wuxuu jabiyay dhul cusub oo loogu talagalay isticmaalka orrogens ee afka ma aha oo keliya codsiyada kiliinikada, laakiin sidoo kale qaybta jirka jirka. Sababta ugu weyn ee hormarinta daroogadu waxay ahayd in la beddelo tijaabinta dabiiciga ah ee ragga ah marka heerarka dhamaadka ah ay ka hooseeyaan sida caadiga ah.
Inkastoo Methyltestosterone for sale waxaa la heli karaa sida steroid afka ah oo aan la dabooli karin, Caba Pharmaceuticals ayaa la yimid kiniinno bukaan ah oo si toos ah u kala saari lahaa carrabka. Daawooyinkaasi waxay ahaayeen dhammaan ciilkii u dhexeeyay 1950s iyo 1990s leh magac caan ah, Metandren Linguets.
Halkii aad ka liqi lahayd kiniin Methyltestosterone, waxaad kari kartaa kiniinada Metandren Linguets 'oo ka hooseysa carrabka oo u oggolow inay kala gooyaan. Marka la nuugo, steroid waxay ku wareegtaa xuubka dheecaanka iyada oo aan la jarin beerka.
Sida noocyada kale ee steroid anabolic, isticmaalka daroogada ayaa weli ku muransan. Inkastoo ay hayso taariikh nadiif ah, waddammada intooda badani way mamnuucaan oo la sifeeyaa Bixiyaha Methyltestosterone suuqyada daroogada. Qaado, tusaale ahaan, 80s ka danbeeya; Jarmalka Endocrine Society waxay keeneen joojinta ganacsiga Methyltestosterone oo ka yimid farmashiyayaasha Jarmalka.
Dabadeedna, waddamada Yurub badankood waxay raaceen habab iyo mamnuucay sababaha saameynaha Methyltestosterone ee ka iman kara sida hepatotoxicity. Waddanka Maraykanka, daroogada ayaa loo oggol yahay labada daaweyn iyo daaweynba. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la helo qaab-u-keli ah maadama methyltestosterone marwalba la isku daro maaddooyinka kale.
Dalka Mareykanka, daroogadu waa sharci ahaan kaliya iyada oo warqad dhakhtar ah oo sax ah. Ururada ciyaaraha fudud ee ay ka mid yihiin Guddiga Olombikada Caalamiga ah ayaa ciqaabay isticmaalka methyltestosterone ciyaaraha. Waa sheyga III iyo IV ee Maraykanka iyo Kanada, siday u kala horreeyaan.
Sidee Mastestestosterone u shaqeysaa
Qaadashada steroid alpha alfaated, Methyltestosterone waxay ku xidhan tahay qabtayaasha xaydhadka (AR). Waxay u muuqataa sida substrate for 5α-reductase enzyme, halkan, beddelidda 17α-methyl-dihydrotestosterone (mestanolone). Ka dib marka la qabsado unugyada AR, steroid waxay bilaabeysaa qorista jinsiga iyo jawaabaha hidde-celinta, kuwaas oo mas'uul ka ah kobaca weyn iyo astaamaha jinsiga.
Si ka duwan noocyada kale ee derajada testosterone, baaritaanka methyl wuxuu leeyahay heerka hoose ee waxqabadka anabolic. Sidaa darteed, saamiga anabolic ee saamiga orrogenic waa wax yar ka yar, samaynta steroid in ay leeyihiin guryaha oo ka sarreeya oo ka sii sarreeya.
Dhibaatada xun ee methyltestosterone steroid jirka ah waa in uu aromatizes inta lagu guda jiro habka waxqabad ee jirka. Xaraaraynta xayiraad xoogan 17α-methyl estradiol waxay dhalisaa estrogenicity iyo saameynaha dambe ee estrogenic sida ilaysiinta biyaha iyo ginecomastia.
Methyltestosterone qaabdhismeedka qaabdhismeedka
magaca Product Methyltestosterone
Magaca kiimikada · 17a-methylandrost-4-en-17β-ol-3-mid
CAS maya. 58-18-4
Xaaladda dhibicda (° C) 161 - 166
Qiyaasta karkarinta (° C) 383
heerkulka kaydinta Ku kaydi heerkulka qolka (2 ° C - 20 ° C), ka fog kuleylka, qoyaanka, ama nalka
Imaanshaha Dufan karkar leh oo kookheera cad ah
miisaanka kelli 302.46 g / mol
milmi • Xakamaynta biyaha waa 34 g / mol ah 25 ° C
· Si tartiib ah u labanlaabee saliidda cuntada
Fasalka daroogada Cudurka Anabolic-androgenic
isticmaalka Xoojinta jirka iyo kor u qaadida heerarka tamarta
Qiimeynta Anabolic 115 - 150
Qiimeeynta Androgenic 95 - 130
Magacyada Ganacsiga Guud · Metandren
· La tijaabiyey
Hababka Methyltestosterone Administration
Waxaa jira saddex nooc oo maareynaya methyltestosterone. Maadaama laga helo qaab kiniin ah, qaabka caadiga ah waa afka. Waxaad liqi kartaa kiniinka ama ku dheji carrabka hoostiisa ama inta u dhexeysa daanka iyo ilkaha ee loogu talagalay sublingual iyo buccal administration, siday u kala horreeyaan. Xaaladdan oo kale, daroogada si toos ah ayay u milmi doontaa iyada oo aan la marin mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Isticmaal steroid hal mar maalintii saddex toddobaad oo waqti isku mid ah. Fikrad ahaan, hubi inaad u maamusho calool madhan si aad u kordhiso bioavailability. Qaadashada tijaabada methyl ee cuntada waxay keeni kartaa in la burburiyo dufanka aan saliidda lahayn, sidaa daraadeed, yareynta nuugista dhiigga.
The Qiyaasta Methyltestosterone waxay u dhigantaa dhowr arrimood. Tusaale ahaan, ragga ayaa had iyo jeer ku leh qiimaha ugu sarreeya ee qiyaasta daaweynta marka loo eego haweenka. Sidoo kale, dariiqa maamulka ayaa go'aamin doona qadarka steroid ee jir-dhiseyaal qaadan doono. Haddii aad doorbideyso kiniiniga bukaansocodka, qiyaasta daawadu waxay noqoneysaa mid hooseeya sababtoo ah awood xoog badan.
Ujeedooyinka kor u qaadista jirka, qaadashada qiyaasta maalin kasta ee u dhaxeysa 10mg iyo 50 mg ugu badnaan toddobaadyada XNUM. Si kastaba ha noqotee, bukaanada ka shaqeynaya yaraanta cunugga waxay u isticmaali karaan daawada ilaa iyo inta ay saameyntu tahay mid yar. Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Anavar (Oxandrolone) jir dhiska
Haddii ujeedadu tahay inaad kobciso waxqabadka, methyltestosterone maaha adiga. Aan sharaxo. Waxay leedahay saameyn heer sare ah, oo aan si fiican ugu habboonayn dheelitirka hormoonka haweenka. Sidaa daraadeed, ma'aha qiimaha halista ah ee waxyeellada waxyeelleyaasha.
Waxaa lagugula talinayaa in haweenka ay isticmaalaan steroid kaliya marka loo eego dhakhtarka rijeetada. Xaaladaha badankood, qiyaasaha sida hooseeya ee 3mg ayaa maamusha calaamadaha menopause. Si kastaba ha ahaatee, maalin walba methyltestosterone qiyaasta waxay u tagi karaan 200mg markay daaweynayaan kansarka naasaha aan shaqeyn karin.
Ka hor intaadan qaadin tijaabada methyl, hubi inaad akhrido calaamadda dawada. Macluumaadkani wuxuu ku siin doonaa adiga oo ku saabsan sida loo isticmaalo daroogada, taxaddarrada amniga ee la qaado, iyo waxa laga filayo goorta qiyaasta daawada.
Nooca kale ee muhiimka ah ee la xusuusto waa inaad hubiso inaad methyltestosterone maamusho wakhti caadi ah. Haddii ay dhacdo inaad qadato qiyaasta maalin kasta, u qaado sida ugu dhakhsaha badan ee fekerkaaga kugu dhejiyo. Haddii ay haboon tahay waqtigii la soo dhaafay, ka bood erayga la seegay oo sii wad raashinkaaga caadiga ah.
Daawadani waxay u dhigantaa ragga iyo dumarka. Si kastaba ha noqotee, dheddiguhu waa inay isticmaalaan qiyaasta ugu hooseeysa intii suurtagal ah.
Imtixaanka Methyl waxaa suura gal ah in uu la falgalo daawooyinka badankooda, daawooyinka dheeraadka ah, daawooyinka dhirta, iyo daawooyinka kale ee aan la qorin. Liiska waxaa ka mid ah daawooyinka sonkorowga, daawada dhiig-yari sida warfarin, iyo oxyphenbutazone.
Hooyooyinka uurka leh iyo kuwa kalkaaliyaha nuujinaya waa in aysan qaadan methyltestosterone. Xitaa haddii aad uur leedahay intaad ku jirto daroogada, waa inaad ka fakartaa joojinta qaadashada. Daraasad lagu sameeyo jiirka uurka leh waxay xaqiijinaysaa in steroid uu keeno naafanimada cilladda naas nuujinta, uurjiifka, iyo cilladaha kale ee uurjiifka.
Carruurta iyo dhallinyarada, isticmaalka imtixaanka methyl waxay u badan tahay inuu farageliyo horumarka lafaha.
Kooxaha kale ee u hoggaansan yahiin nadiifinta steroid waa bukaanka kansarka, dadka qaba xaaladaha wadnaha, iyo kuwa qaba cudurada dhiiga. Inkasta oo ay leedahay taariikh ku saabsan maareynta iyo daaweynta kansarka naasaha, waxaa habboon in dhakhtarku qoro.
Waa hagaag, haddaad tahay cayaariye firfircoon, waxaa laga yaabaa in steroid laga yaabo inuu noqdo xulashada kaliya ee kor u qaadaya waxqabadkaada iyo sii kordhintaadaadaada. Si kastaba ha noqotee, waa inaad daawataa tan iyo markii ururada ciyaaraha fududi ay kuugu yeeri doonaan. Waxaad shaki gelineysaa rikoodhka aduunka, laakiin masuuliyiinta ayaa kaa saari doona madadaada waxayna kaa mamnuucayaan inaad ka qeyb qaadato ciyaaraha fudud.
Miisaanka caadiga ah ee methyltestosterone wuxuu socdaa inta u dhaxaysa lix ilaa sideed usbuuc. Qiyaasta afka ee afka laga qaato waa 40 - 50mg. Hase yeeshee, tani macnaheedu maaha in qiimaha kasta ee ka hooseeya noocyadani ay weli dhalin doonaan natiijooyin. Si lid ku ah, waxaad ogaan doontaa dhowr wanaajin oo leh waxyeelo aad u yar.
Haddii aad isticmaali lahayd foomka bukaan-socodka, hubi inaad yareyso qiyaasta ilaa 50%. Waa inaad gooyaa qadarka sababta oo ah qaabkani wuxuu leeyahay bioavailability sare marka loo eego foomka afka.
Dhamaadka dhammaadka methyltestosterone wareegga, celceliska wax soo saarka hormoonada testosterone waxay u badan tahay inay ku dhacaan. Xaaladdan, u beddel daaweynta wareega dambe si ay u sii wadaan heerkooda.
4. Natiijooyinka Methyltestosterone
Iyadoo loo eegayo nolosha nuska gaaban, methyltestosterone wuxuu gaari doonaa heerkiisa ugu sarreeya isla markaana gali dhiigga illaa hal saac. Haddii tababaraha firfircooni uu qaato steroid wax yar ka hor tartanka, wuxuu helayaa xoogga ugu sarreeya, gardarrada, iyo tamarta lagu tartamo.
In ka methyltestosterone bulking wajiga, isbeddelada ayaa si tartiib tartiib ah u muuqda. Haddii aadan sameynin xoogaa xoog ah, adigu ma heli kartid musqulo khayaali ah oo aad ku riyootay.
Methyltestosterone caadiga ah nus-nolosha ayaa ku jira xadka 2.5 ilaa saacadaha 3.5. Guud ahaan, tani waxay ku saabsan tahay saacadaha 3.
Ka dib qiyaasta ugu dambeysa, methyltestosterone iyo metabolitigeeda waxay joogi doonaan jirka illaa wiig ka hor dhamaadka tirtirida. Inta lagu jiro baaritaanka, illaa 90% waxay ka jiri doontaa kaadida halka inta soo hartay ay soo baxayaan saxarada.
Iyadoo horumarka sare ee tiknoolajiyada, waxaad weli ogaaneysaa raadinta steroid afar ilaa lix toddobaad ka dib markaad joojiso. Hase yeeshee, suurtogalnimada suurtogalka ah ayaa ku xiran haddii uu isticmaalaha furosemide ama phenobarbital si loo dedejiyo qashinka methyl test.
Kuwa ku jira wareega jarista, oo ku dhex jira methyltestosterone ee nidaamkaaga ayaa shaki ku jiraa natiijooyinka wanaagsan. Steroid waxay leedahay saameynta ugu yar ee anabolic. Sidaa darteed, korodhka miisaanka ma aha mid aad u muuqda oo waxay noqon doontaa mid aan macquul ahayn.
Dhab ahaantii, miisaankii muuqda marwalba waa uu sabab u yahay sii-daynta biyaha. Marka loo eego dhamaadka mitirka methyltestosterone, waxaa jiri doona heerar sarreeya biyaha qulqulaya sida user-ka diiwaangelin weyn u ah miisaanka jirka.
Methyltestosterone miisaanka koritaanka meel kasta oo laga yaabo inaanu ku siinin miisaankii ugu fiicnaa ee aad rabto. Tusaale ahaan, xaddiga aad ka faa'iideysan doonto waxaa ugu wacan qulqulka dareeraha sare iyo miisaanka biyaha kadib. Markaad buuxiso wareegga, hubi inaad marayso daaweyn wareeg ah si aad u ilaaliso cabbirka jirka.
Si aad u badbaado, isku day inaad istaagto steroid. Marxaladda xajmiga, ku dar daroogooyinka sida Dianabol, Decanoate, ama Trenbolone.
8. Gargaarka Methyltestosterone
1) Kordhinta Waxqabadka
Ficilada steroid by by la joojiyo dhaqdhaqaaqa habka iyo kor u qaadida anabolism. Ficilkan, marka loo eego, wuxuu kordhiyaa waxqabadka, wuxuu hagaajiyaa awoodda guud, wuxuuna sare u qaadaa maskaxda. Dhamaan kuwa jidhka sameeya, kuwa korreeya, iyo cayaaraha firfircoon ee firfircoon, faa'iidooyinka methyltestosterone waa kuwo lagu daray. Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin inay sameeyaan tababar xooggan oo leh tamar badan iyo istaandarka ugu badnaan iyada oo aan la tirin.
2) Waxay kordhinaysaa gardarrada
Ma waxaad rabtaa in aad noqoto nin adag oo xaafad ah? Hagaag, methyltestosterone wuu qaban doonaa. Qof kasta oo ka mid ah cayaaraha isboortiga ayaa doonaya inuu soo kabsado gardarradooda, xoogooda, iyo diiradda inta lagu jiro ciyaarta.
3) Waxay kordhisaa Muruqyada Mass
Inkasta oo aan laga yaabo inaadan culeysin jirdil culus, weli waxaad ku jiri kartaa bangiga daawada si aad u bilawdid methyltestosterone bulking wareegga. Waa in aad ogaatid in kororka dhererka jirka ay had iyo jeer u sabab tahay miisaanka biyaha sida hormoonka aromatizes.
4) Dhaqdhaqaaq Steroid ah
Iyadoo methyltestosterone, waxaad dareemi doontaa saameynta daawada, ma aha wax ka badan saacad ka dib qaadashada. Isbeddellada ayaa lagu ogaan karaa nikwada wakhtiga hal sabab. Steroidku wuxuu leeyahay nolol yar oo gaaban. Sidaa darteed, waxay gaari doontaa ugu sarraysa tirada saddexda.
5) Bioavailability High
Joogitaanka kooxda methyl ee qaab-dhismeedka methyltestosterone waxay kordhisaa bioavailability iyada oo qiimo u dhaxaysa lix ilaa sideed saacadood. Ilaa iyo inta aad ku hayso heerka ugu fiican ee daroogada dhiigga, waxaad ku gaari doontaa xoogaa sare iyo waxqabad aad u fiican.
Daawada ayaa sii dheeraato jirka marka aad qaadato adoo adeegsanaya bukaan-socodka bukaanka marka loo eego marka aad liqdo kiniinka. Qalabkaani wuxuu dhacaa sababtoo ah waxay si toos ah u gashaa nidaamka qumanka iyada oo la nuugayo iyada oo aan laga marin beerka.
6) Waxay xakameysaa heerarka testosterone
Haddii wax soo saarka dabiiciga ah ee testosterone uu hooseeyo, waxaa had iyo jeer lagula taliyaa in la isticmaalo methyltestosterone. Daawada waxay faa'iido u leedahay raga leh labadaba hypogonadism oo labadaba ah sida guuldarooyinka tijaabada ah iyo yaraanta maqaarka hormoonada ee gonadotropin (GnRH). Xaalado kale waxaa ka mid ah dhaawacyada hipotoolia, samaynta unugyada aan loo baahnayn, iyo maqnaanshaha dabiiciga ah ee xajmiga xayawaanka.
Iyadoo la tixgelinayo in ay tahay qaab hufan oo hormoon ah oo hormoon ah, methyltestosterone wuxuu u dhaqmayaa si isku mid ah isla markaana wuxuu u jilciyaa sifooyinka lab ah ee lab ah.
Imtixaanka methyl ma aha mid aad u awood badan, laga yaabee ayadoo ay sabab u tahay saamiga hooseeya ee anabolic ilaa hawlaha orrogenic. Halkaan waxaa ah warka wanaagsan, inkastoo. Markaad ku dhejin karto steroids kale, fursadaha waa inaad ku dhafacdo muraayada.
Tusaale ahaan, haddii aad ku socoto wareegga xajmiga, isku-darka methyltestosterone oo leh Dianabol, Nandrolone, Trenbolone, ama Decanoate ayaa sameyn doona. Dhinaca kale, steroidkaan wuxuu si fiican ugu dhejin doonaa stanozolol marka aad rabto oo dhan waxay kordhineysaa xooggaaga.
8) Daaweynta Kansarka Naasaha
Methyltestosterone wuxuu cadeeyay inuu yahay mid wax ku ool ah maareynta kansarada naasaha ee hore u faafay unugyada kale ee haweenka. Sababta nooca burka noocan ah waa hoormoon xasaasiyadeed, waxay dib u cidhiidhin doontaa. Kansaromiin kale oo ku tiirsan hababka noocaas ah waa endometrium, qaar ka mid ah leukemia, lymphomas, iyo kansarka qanjirka 'prostate'.
Ka sokow, daroogadu waxay ka hortagtaa xanuunka naas-nuujinta dhalmada. Farqiga Ugu Muhiimsan ee u dhexeeya Tijaabinta Enanthate iyo Cypionate Test
9) Maaraynta Calaamadaha Menopausal
Bilowga menopause waxay u keentaa heerarka hooseeya ee istroga ee haweenka. Hoos u dhaca hoormoonkan ayaa mas'uul ka ah xoojinta galmada, hoos u dhaca libido, nalalka kulul, iyo astaamaha la xiriira.
Daraasaduhu waxay muujinayaan in daaweynta xaaladaha postmenopausal ee tijaabada Methyl Test. Dhiirigelinta, haweenku waxay qaadan karaan qadar yar oo daroogada ah iyada oo aan la kulmin saameyno liddi ku ah.
10) Daaweynta Bini-aadamnimada Dib loo dhigay
Xaaladda qaan-gooyo goor dambe, methyltestosterone waxay noqon kartaa midka kaliya ee ku haboon ee loogu talagalay kicinta sifooyinka jinsiga. Tallabadani waxay khuseysaa marka dhibbanaha uusan si fiican uga jawaabin daaweynta nafsaaniga ah.
Dhakhaatiirtu had iyo jeer waxay qorayaan daroogada illaa lix bilood.
11) Hormone Testosterone Male Asal
Inkasta oo ay tahay macmacaan iyo 100% macmal, methyltestosterone waa nooc saafi ah oo ah rag iyo dumar. Qaab-hawleedka wax-qabadkiisu waa barbardhac ah kuwa ka mid ah testosterone. Qaado, tusaale ahaan; daroogadu waxay ku xidhan tahay unugyada maqaarka iyada oo aan jirku ogaan in hormoonka uu yahay ajnabi. Teeda kale, imtixaanka methyl wuxuu u dhaqmayaa sida haddii ay tahay arogen xabbad.
9. Baadhitaanka Methyltestosterone
In ka badan 90% ee dib u eegista methyltestoneone waxay xaqiijinayaan in steroid uu yahay mid wax ku ool ah. Dhinaca jidhka, mid ayaa marka hore la kulmi doona koror iyo gardarro. Dhinaca kale, bukaanka qaba hypogonadism iyo heerarka testosterone oo hooseeya ayaa soo sheegey waxoogaa horumar ah.
100% dhammaan dadka isticmaala waxay ku heshiiyeen in methyltestosterone uu sahlan yahay isticmaalka iyo maamulida. Ma jiraan qiyaaso adag ama cirbado xanuun leh. Ka sokow, qaadashada daroogada hal mar maalintii ayaa ah kuwo lagu daray dad badan oo raba in ay ilaawaan daawooyinkooda sababta oo ah ballanqaadyada kala duwan.
Kadib wareeg dhammaystiran, keliya kala bar dadka isticmaala methyltestosterone ayaa ku qanacsan. Qof kasta oo doortay inuu joojiyo daroogada wuxuu lahaa laba sababood oo muhiim ah. Tusaale ahaan, dadku waxay lahaayeen aqoon yar oo lagu maareeyo dhibaatooyinka soo gaara ka hor intaanay dhicin. Sidaa daraadeed, kororka xun ayaa ka weyn maadooyinka methyltestosterone. Laba, qaar kale waxay u maleeyeen in steroids kale ay ka shaqeysnaayeen methyltestosterone.
Isagoo ku saleynaya dib u eegista methyltestosterone, qiyaastii qof kasta oo isticmaala ayaa la kulmay hoos u dhaca daroogada. Saqiiqada saxda ah ee lagu boodi karo saamaynta daawadu waa iyada oo la qaadanayo qiyaaso hoose, isticmaalka isticmaalka gaaban, iyo sameynta wareegyo gaaban. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca waxaa ka mid ah;
Maqaarka laftirka ah iyo finanka
Socdaal aan caadi aheyn
Koritaanka xad dhaafka ah ee timaha
Kintirka dheeraadka ah
Xaaladaha wadnaha iyo wadnaha
Saameynnada daawada Methyltestosterone iska tag markaad joojiso qaadashada. Si kastaba ha noqotee, haweenka dumarku waxay ku raaci karaan qabrigaaga.
Sida looga fogaado Saameynta Methyltestosterone
Qaado qadar yar oo steroid ah iyada oo xaddidaysa dhererka wareegga illaa toddobo wiig si aad uga fogaato cilladda beerka
Qaado methyltestosterone oo ay weheliso 5α-reductase xannibaadayaasha sida finasteride, dutasterid, ama xayawaano la mid ah, taas oo nasiib u yeelan doonta saamaynta dihydrototestosterone.
Marka daroogadu isbedesho DHT, waxay keenaysaa dhibaatooyinka qanjirka 'prostate' iyo timo lumis.
Isticmaal xayawaanka aromatase sida Tamoxifen, Nolvadex, ama Arimidex si looga hortago saameynta daawada estrogenic
Jooji qiyaasta marka aad la kulanto waxyeellooyin xun
Isticmaal daawada loo yaqaan 'Liv-52' ama Gargaarka Beerta si loo ilaaliyo dhaawaca suurtagalka ah
Si loo yareeyo cadaadiska wadnaha, samee barnaamij jimicsi firfircoon intaad ka fogaato dufanka buuxa, karbohidratka, iyo kolestaroolka. Ka sokow, waxaad ku dari kartaa cuntadaada saliidda kalluunka iyo antioxidant.
Ka dib markaad dhammaato wareegga, waa inaad fulisaa nidaamka PCT si aad u bilawdid wax soo saarka hormoonka testosterone endogenous.
Qaado biyo badan intaad ka fogaato cabitaanka khamriga
Maadaama isticmaalka imtixaanka methyl uusan ahayn gebi ahaan sharcidarro, waxaad u badantahay inaad u dhacdo alaab been abuur ah. Haddii aad haysatid warqad dhakhtar ah oo takhtar ah, helitaanka steroid waa u fududahay sida dukaameysiga loogu talagalay labo ka mid ah dharbaaxayaasha. Sidoo kale waad awoodi kartaa iibso budada Methyltestosterone ama iibso ikhtiyaarka u-diyaarka ah ee loo isticmaalo cilmi baarista, ujeedooyinka jirka, ama codsiyada daweynta.
Mararka aanad haysanin talo bixinta dhakhtarka, ikhtiyaarka kali waa inuu dhaco suuqa madow iyo sheyaalka dhulka hoostiisa. Waa hagaag, dhammaantood maaha kuwa been abuur ah! Waxaad ka iibsan kartaa hareeraha dukaamada sida tan Buyaas loogu talagalay daaweynta steroids tayada iyo qiimaha leh.
Dukaamada internetka, methyltestosterone for sale waa ka jaban, aad u kalsoon yahay, iyo aad si dhib la'aan ah u barbar dhig qiimaha u dhexeeya iibiyeyaasha kala duwan.
Methyltestosterone waa xayawaan ka baxsan, kaas oo ku dhow inuu la mid yahay testosterone endogenous. Inkasta oo hore ay tahay macmacaan, labadoodaba waxay leeyihiin qaab ficil ah oo ficil ah ilaa inta jidhku uusan sheegi karin farqiga. Marka laga reebo testosterone dabiiciga ah, waxaa jira noocyo kale sida Test Propionate ama Cypionate, isla sidaas oo kale.
Methyltest wuxuu leeyahay bioavailability afka marka la barbar dhigo testosterone sababtoo ah kordhinta kooxda methyl ee qaabkeeda. Si kastaba ha noqotee, labadaba steroids waxay daaweyn karaan qaan-gooyo goor dambe, cudurka hypogonadism, xanuunka postpartum xanuunka iyo qallayl, kansarka naaska, iyo xiniinyaha aan loo baahnayn.
Siyaabo isku mid ah
Waxay ka tirsan yihiin kooxda steroids anabolic-androgenic
Waxay kor u qaadaan waxqabadka, awoodda, iyo murqaha jirka ee jir-dhiseyaasha, cayaaraha firfircoon ee firfircoon, iyo awood-bixiyeyaasha
Waxay leeyihiin codsiyo daaweyn oo lagu daaweynayo hypogonadism iyo heerarka hoose ee testosterone
Nolol nus-nus ah
Qiime hal cutub Si aad u sarreeya mooyee haddii aadan iibsan methyltestosterone in badan Sida qaalibka ah u hooseeya
Habka maamulka Oral, buccal, iyo sublingual Waxaa loo heli karaa sida jadeecada transdermal iyo xal
Ogolaansho sharci ah 1972 1953
Qaabdhismeedka Waxaa jira koox methyl ah oo ku jirta 17th jagada atom atom ah Methyl ma dhismaha
Methyltestosterone wuxuu ka mid yahay steroids yar oo istiraatijiyadeed iyo labadaba saameynta daaweynta iyo jirka. Ugu yaraan, daroogada ayaa si fudud loo heli karaa oo lagu kalsoonaan karo maadaama dawladaha qaarkood ay sharciyeysey isticmaalka codsiyada caafimaadka.
Inkasta oo maqaalku aanu kuu xaqiijin ammaankaaga hubaal ah markaad isticmaalayso tijaabada methyl, waxay ku siinaysaa foorar ku saabsan waxa laga filayo inta aad qaadaneyso. Iyadoo la tixraacaayo macluumaadka, waxaad miisaani kartaa khatarta oo aad ku dheelitiri kartaa faa'iidooyinka. Haddii ay u qalantaa, markaa waad fiicantahay iibso methyltestosterone online.
Daroogo kasta waxay leedahay saameynteeda. Sidaa darteed, qarsoodiga keliya ee ku riyaaqaya natiijooyinka waa iyada oo la maareynayo kuwan soo koraya. Haddii aad akhrido maqaalkan, waxaad fahmi doontaa hacks yar.
Ma raadineysaa heshiis? Ka hubi shirkadaha methyltestosterone oo lagu kalsoon yahay Buyaas.